I-Mini Spy Cam efihliweyo Ikhamera efihliweyo encinci yeNanny Cam (SPY14) | Izisombululo ze-OMG
I-Mini Spy Cam Ikhamera Efihliweyo 720P I-Portable Small Nanny Cam (SPY14)
Ikhamera elincinci elincinci: I-OMGSPY14 irekhodi yevidiyo efihliweyo (1.0in, i-0.6oz cube) yiyona ikhamera yomzimba ephathekayo kakhulu. Unokurekhoda zombini iifoto kunye namavidiyo ngaphandle kokutsala nayiphi na ingqalelo. Umklamo omncinci kunye neziphathekayo wenza ukuba kubekho ukhuseleko lwekhaya kunye nokubeka iliso ngasese. Inokusetyenziswa kwakhona njengenkampani ye-nanny.
IiVideos eziphezulu ze-HD kunye neefoto: Iirekhodi ividiyo kwi-1280 x 720p kwi-HD kwii-30 ozimele ngeesibini. Ukongeza kwiividiyo eziphezulu zekhwalithi zemini kunye neefoto, eli liqela lekhamera linokurekhoda ebumnyameni obuninzi kunye ne-10 kwi-15ft.
Isandi esilungeleyo Ukurekhoda: Ungasetyenziselwa ukurekhoda ngokuzenzekelayo xa kubangelwa nayiphi na isandi esikhulu kunale 60dB. Ngelo xesha, ikhamera iya kubhala ividyo kliphu ezimbini. Ukuba ufuna ukurekhoda amavidiyo ngesandla, unokwandisa ubude bevidiyo ukuya emihlanu imizuzu nganye.
Loop Ukurekhoda Umbutho Cam: Le ngxowa ye-spy isekela amakhadi we-10 microSD kunye ubuncinane ne-8 GB kunye ne-max 32GB (ikhadi leSSS alifakiwe) ukurekhoda kweloop. Xa ikhadi lizele, liya kubhala ngokuzenzekelayo iifayile zevidiyo ezidala kunabo bonke. Ikwaxhasa kwakhona ukurekhoda kunye nokuhlawula ngexesha elifanayo, ngoko akudingeki ukhathazeke ngokuphelelwa ngumsebenzi webhethri.
Ukuphakanyiswa njenge-0.81 * 0.98 * I-1.08 intshi, ikhamera encinci ye-spy ikhamera ye-pocket body. Idizayini encinci kunye neziphathekayo zingasetyenziswa njengekhamera yevidiyo eqhelekileyo okanye ikhamera efihliweyo ukukhusela i-home and secret segment. Ingasetyenziselwa njengenkampani ye-nanny okanye umgcini wendlu.
Ngekhamera yekhamera ebandakanyiweyo kunye ne-bracetic magnetic, unokwenza ikhamera kwidesksi, edongeni, kwaye njengaye ipokotho okanye ikhamera yomzimba ngokulixhoma kwi pocket yakho, yithatha yonke into uhamba kuyo ukurekhoda yonke imzuzu.
Ngaphambi kokusebenzisa ikhamera ye-OMGSPY14, kufuneka umthwalo kwaye kunye faka ikhadi le microSD, bese uqala ukusebenzisa ikhamera kwaye ukhethe indlela ethile ukurekhoda ngokusekelwe kwiimfuno zakho, ezifana ukurekhodwa okuvakalayo kwaye yokurekhoda.
Ekugqibeleni kuncinci, silungiselele ubungcali kunye neenkcukacha incwadi yomsebenzisi kwiphakheji, unokufumana yonke imiyalelo apho.
Uncedisa imisebenzi emininzi:
Ingasetwa kwiimodyuli ezininzi ezisekelwe kwiimfuno zakho ezithile.
Isandi esilungele ukuBhala: inokusetha ukurekhoda ngokuzenzekelayo xa ibangelwa nayiphi na isandi esikhulu kune-60dB.
Ukurekhoda ngesandla: iirekhodi eziqhubekayo.
Indlela yokujonga ebusuku: iirekhodi ngobumnyama obupheleleyo kunye ne-10 kwi 15ft.
Uncedisa ukurekhoda ngelixa uhlawula kunye nokurekhoda kwelophu:
Musa ukuxhalabisa ngokunqongophala kwebhetri kunye nomthamo wamakhadi.
Ixhasa ukurekhoda nokuhlawula ngexesha elifanayo, unako ukufakela ibhanki yamandla angaphandle ukuhlawulisa, ngoko akudingeki ukhathazeke ngokuphelelwa ngumsebenzi webhethri.
Ikwaxhasa i-32 GB microSD enkulu ukurekhoda kwelophu, Xa ikhadi lizele, liya kubhala ngokuzenzekelayo iifayile zevidiyo ezidala kunabo bonke.
IiRekhodi eziphezulu zevidiyo ze-HD nezithombe:
Awukwazi ukuqwalasela into encinci yekhamera epheleleyo.
Irekhoda ividiyo kwi-1280 x 720p HD eyinqanaba kwiifayile ze-30 ngesibini.
Ukongeza kwiividiyo eziphambili zeemini kunye neefoto, eli liqela lenkcenkca liyakwazi ukurekhoda i-video yomnyama ebomvu nelomhlophe.
9.8 x 7.9 x 10.6 intshi
8010 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-32 Namhlanje